Wararka Maanta: Jimco, May 17, 2019-Madaxweyne Biixi oo cafiyey 517 maxbuus oo ku jira xabsiyadda Somaliland
Maxaabiistan la cafiyey ayaa laga soo xullay dhamaan xabsiyadda Somaliland, kuwaas oo xukunkooda loo eegay inay yihiin kuwo fudud.
Wareegtadan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Biixi ayaa u qornaa sidan “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/XM/WM/222-310/052019, uu Cafis Guud u fidiyey Maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xidhan.
3) Waxa cafiskan fulinaya Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, iyada oo la raacayo liiska Maxaabiista Wareegtadan ku lifaaqan.”
Dhinaca kale, magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa si weyn loogu diyaar garoobayaa dabaaldega munaasibadda 18 May oo ah maalinta lagu dhowaaqay inay Somaliland kala soo noqotay Soomaaliya midowgii ay la gashay 1960-kii.
Sanadkan iyo sanadkii ka horeeyey waxay 18 May ku soo beegantay bishii barakaysnayd ee Ramadaan, inkastoo sanadkii hore maalmo hore loo soo dhigay, haseyeeshee sanadkan waxa la go’aansaday in iyadoo la sooman yahay la dabaaldego, waana markii ugu horeysay ee bil Ramadaan iyadoo lagu jiro la xuso 18 May.